एक ब्लग ब्रेक लिए! | Martech Zone
म मेरो साइट मा 1 गुणवत्ता पोस्ट को प्रयास को लागी राम्रो राम्रो भएको छु पछि राम्रो लिंकहरु र नेट मा लेख मा एक पोस्ट को लागी पछि केहि समय को लागी। हिजो राती मैले लिएँaब्लग ब्रेक। आदर्श रूपमा, ब्लग ब्रेकको अर्थ म ओछ्यानमा गएँ र पढ्दा निदाएको छु। मेरो लागि होईन।
हिजो राती मैले यहाँ कस्बामा स्थानीय दानका लागि कस्टम गुगल नक्शाको विकासलाई निरन्तरता दिएँ। यो रमाईलो फ्रीबी प्रोजेक्ट हो जुन प्रयोग हुन सक्छ वा हुन सक्दैन - तर तपाईं भन्दा ठूलो कुनै कुराको अंश बन्नु सधैं एक उत्तम अनुभव हो। यसले मलाई नयाँ व्यक्तिहरूसँग परिचय गरायो र मलाई नयाँ उद्योगहरूमा पर्दाफास गरियो, सँधै प्लस।
मसँग केहि रमाईलो ईमेलहरू पनि थिए जुन हाम्रो उत्पादन प्रबन्धनको सन्दर्भमा क्वालिटी भन्दा बढि बहस क्वालिटी गर्दै। यो सँधै रमाईलो कुराकानी हुने गर्दछ, केहि पनि डेलिभर गर्ने वा केहि नगर्ने जोखिम जुन आदर्श नहुन सक्छ। यो गाह्रो कल हो। म हाम्रा विकासकर्ताहरूको अन्तर्ज्ञानलाई विश्वास गर्न जाँदैछु र उनीहरूले के जादू गर्न सक्छन् भनेर हेर्न सक्छन्।
म यसको लागि उत्तरदायी हुनेछु, त्यसैले यो म आफैं त्यहाँ बाहिर राख्दै छु। जे होस्, मानिसहरू अक्सर तपाईंलाई चकित पार्छन् जब कि तिनीहरूलाई सशक्त बनाउँदछौं। यो त्यस्तो कुरा हो जुन म प्रचार गर्दछु, त्यसैले म आफ्नै शब्दहरूद्वारा राम्रोसँग बाँच्दछु!
म यहाँ कहिल्यै पाहुना ब्लगर भएको छैन तर स्पटलाइट साझा गर्न खुशी हुनेछ। मलाई एक टिप्पणी ड्रप वा मलाई सम्पर्क गर्नुस् यदि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने। तपाईंसँग वास्तवमै एक ब्लग हुनु आवश्यक छैन, यद्यपि। वास्तवमा, मँ बरु त्यस्तो व्यक्ति हुँ जो ब्लगमा कुराकानीमा सामेल हुँदैन। सायद तपाईले 'बग समात्नुहुनेछ'।
मेरो साथी ब्लगरहरूको लागि, पाहुना ब्लगरले अधिक वा कम कामको परिणाम दिन्छ? केवल जिज्ञासु।
पुस्तक रिलीज! रेनी पाभलिश: नेफिलिम, ईविलको उत्पत्ति
मार्क्स 23, 2007 मा 1: 28 PM
अतिथि ब्लगिङ अझै काम छ। कुरा यो हो कि तपाईले ब्लगरको जस्तो अनुभव प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न - यो सामान्यतया नयाँ ब्लगरहरू हुन् जो अतिथि ब्लग गर्न चाहन्छन्। साथै सम्झौता गर्न थप संचार छ।
मार्क्स 24, 2007 मा 9: 55 PM
यदि मलाई एउटा विषय दिइयो जुन मैले साँच्चै विस्तार गर्न सक्छु, तब म तपाईंको अतिथि हुन पाउँदा खुसी हुनेछु। त्यो धेरै अनुभवहरू मध्ये एक हो जुन मैले अहिलेसम्म गुज्रिएको छैन, र यदि मैले यसलाई जीवित पारें भने यो पक्कै पनि एक ठूलो उपलब्धि हुनेछ।
अप्रिल 3, 2007 मा 12: 27 PM
एकपटक मैले ट्राफिक निर्माण गरेपछि म अतिथि ब्लगरहरू समावेश गर्ने प्रयास गर्नेछु। यस्तो देखिन्छ कि यो अधिक काम हुनेछ तर दुबै ब्लगरहरूले साझेदारीबाट लाभ उठाउनेछन्। यो केहि चीज हो जुन मलाई लाग्छ कि अधिक ब्लगरहरूले गर्नु पर्छ